Fahasamihafana eo amin'ny asidra Benzoic sy Sodium Benzoate | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny asidra Benzoic sy Sodium Benzoate | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / Simia biolojika / fahasamihafana misy eo amin'ny asidra Benzoic sy Sodium Benzoate
Fahasamihafana eo amin'ny asidra Benzoic sy Sodium Benzoate
18 Novambra 2019 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny asidra benzoika sy ny sodium benzoate dia ny asidra benzoika no asidra carboxylic manitra tsotra indrindra fa ny sodium benzoate kosa dia ny sira sodium an'ny asidra benzoic.
Ny asidra benzoika dia asidra carboxylic manitra ary ny sodium benzoate dia avy amin'ity asidra benzoic ity. Ireo rehetra ireo dia fitambarana voajanahary satria ireo fitambarana ireo dia samy manana ny peratra benzena manitra, soloina vondrona karbônlôna .
2. Inona ny asidra Benzoic?
3. Inona no atao hoe Sodium Benzoate
4. Fampitahana mifanila - Asida Benzoika vs Sodium Benzoate amin'ny endrika Tabular
Inona ny asidra Benzoic
Ny asidra benzoika no asidra carboxylic manitra tsotra indrindra. Ny refy molekiola misy asidra benzoika dia C 6 H 5 COOH. Ny habetsahan'ny molar asidra benzoika dia manodidina ny 122.12 g / mol. Molekiola asidra benzoika iray dia misy peratra benzena soloina vondrona asidra karboksilika (-COOH).
Sary 01: Kristaly asidra benzoika
Amin'ny maripana sy ny tsindry amin'ny efitrano, ny asidra benzoika dia kristaly fotsy matevina. Somary mety levona anaty rano izy io. Ny asidra benzoika dia manana fofona mahafinaritra. Ny teboka mitsonika ny asidra benzoika dia manodidina ny 122.41 ° C. Ny teboka mangotraka asidra benzoika dia omena ho 249.2 ° C, fa amin'ny 370 ° C, dia lo izy.
Ny asidra benzoika dia mety hiharan'ny fanolo aromatikan'ny elektrofilika noho ny fananana misintona elektronan'ny vondrona carboxylic. Ny asidra karboksilika dia afaka manome ny peratra manitra misy elektronika pi. Avy eo lasa manankarena amin'ny elektrôna. Noho izany, ny herinaratra dia afaka mamaly amin'ny peratra manitra.
Ny asidra benzoika dia fitambarana fungistatika izay be mpampiasa amin'ny fitehirizana ny sakafo. Midika izany fa afaka misoroka ny fitomboan'ny holatra amin'ny sakafo. Ny asidra benzoika dia hita voajanahary amin'ny voankazo sasany toy ny voaroy.
Inona ny Sodium Benzoate?
Ny sodium benzoate dia ny sira sodium an'ny asidra benzoic manana ny raika simika C6H5COONa. Azontsika atao ny mamokatra azy amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitry ny asidra benzoic. Ity fomba famokarana ity dia misy ny fihenan'ny sodium hidroksida sy ny asidra benzoic. Saingy, amin'ny lafiny ara-barotra, afaka mamokatra azy io koa isika amin'ny alàlan'ny fitrandrahana ampahakelin'ny toluene eo imason'ny oxygen. Matetika, ny sodium benzoate dia misy amin'ny vokatra sakafo maro miaraka amin'ny asidra benzoic. Ny loharano manankarena sasany dia anisan'ny legioma sy voankazo. Ny fampiharana lehibe indrindra an'io fitambarana io dia ny fampiasana azy io ho toy ny fitazomana sakafo.
Sary 02: Sodium Benzoate
Ny sodium benzoate dia manana ny molar 144 g / mol. Miseho ho vovoka kristaly fotsy izy io ary tsy misy fofona. Ny teboka mitsonika an'ity fitambarana ity dia 410 ° C.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Benzoic Acid sy ny Sodium Benzoate?
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny asidra benzoika sy ny sodium benzoate dia ny asidra benzoika no asidra carboxylic manitra tsotra indrindra fa ny sodium benzoate kosa dia ny sira sodium an'ny asidra benzoic. Na izany aza, izy roa ireo dia fitambarana organika satria ireo fitambarana ireo dia samy manana peratra benzena manitra, soloina vondrona karbônlôna.
Ambonin'izany, ny asidra benzoika dia tsy voavahan'ny rano amin'ny hafanan'ny efitrano, fa raha manafana ny fitambaran-javatra isika, dia mety ho voavahan'ny rano kokoa; na izany aza, ny sodium benzoate dia mety levona amin'ny rano amin'ny hafanan'ny efitrano. Noho izany, fahasamihafana iray hafa eo amin'ny asidra benzoika sy ny sodium benzoate.
Ny teboka mitsonika ny asidra benzoika dia manodidina ny 122.41 ° C. Fa ho an'ny sodium benzoate, ny teboka miempo dia 410 ° C. Ankoatr'izay, ireo fitambarana roa ireo dia miseho ho toy ny vatan'ny kristaly fotsy, saingy ny asidra benzoika dia miseho ho toy ny rafitra toy ny fanjaitra ary ny sodium benzoate matetika dia vovoka matevina. Ireo fitambarana roa ireo dia manan-danja amin'ny fitehirizana ny sakafo.
Fehiny - Asida Benzoika vs Sodium Benzoate
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny asidra benzoika sy ny sodium benzoate dia ny asidra benzoika no asidra carboxylic manitra tsotra indrindra fa ny sodium benzoate kosa dia ny sira sodium an'ny asidra benzoic. Ireo rehetra ireo dia fitambarana voajanahary satria ireo fitambarana ireo dia samy manana ny peratra benzena manitra, soloina vondrona karbônlôna.
1. "Sodium Benzoate." Wikipedia, Fondation Wikimedia, 3 nov. 2019, Hita eto .
2. Helmenstine, Anne Marie. "Ahoana ny fomba fanaovana bolongam-panala amin'ny asidra Benzoika." ThoughtCo, 5 Jul 2018, Azo zahana eto .
1. "Vongan-kazo kristaly asidra benzoika" Nosoratan'i Devon Fyson - Asa manokana (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia
2. "Sodium benzoate-sangkap" Nosoratan'i Chemik10 ao amin'ny Wikipedia poloney (CC BY-SA 3.0) avy amin'ny Wikimedia Commons
Fahasamihafana eo amin'ny resonance sy ny effet Mesomeric Fahasamihafana eo amin'ny Isopentane sy ny Neopentane Fahasamihafana eo amin'ny Propanol 2 sy Isopropanol Fahasamihafana eo amin'ny Acetone sy Ethanol Fahasamihafana eo amin'ny acetone sy acetate
Fahasamihafana eo amin'ny Perfume sy Eau De Parfum
Fahasamihafana eo amin'ny kohaka kohaka sy ny croup
Fahasamihafana eo amin'ny vatan'ny vatana sy ny lanjan'ny vatana
Fahasamihafana eo amin'ny Sepaly sy ny felany
Fahasamihafana eo amin'ny Prednisone sy Prednisolone